Umhla My Pet » Ndiya Khangela Umntu Ungathanda – Ngoku kuthweni?
ngokuthi kwaye Baritchi
ukubuyekezwa: Jul. 07 2020 | 5 min ukufunda
Ngoko ke, kokuba ezibhalisele isibini kweziza abathandanayo kwaye yayifumana bambalwa abantu ningathanda ukuba ukwazi ngcono… mhlawumbi nokuba umhla. Wenzani ngoku?
kakuhle, ongazisebenzisa ngokuncamathisela iprofayile yakho ulinde umntu ukuqhagamshelana nawe, kodwa uya kuzidla uze mhlawumbi ukufumana iziphumo ezingcono kakhulu ukuba uthathe inyathelo. Xa ufumana umntu umdla kwaye uzive siyanibongoza ukuba ningathi “Hey”, musani bashful! Loo mntu umthande nje ukuva kuwe. Emveni kwakho konke, ke udale i-profayile, njengawe, benethemba dibana nomntu. Wena ngokuqinisekileyo uya kuyazi kokuba uqhagamshelane nabo kwaye ufumanise.
Manene, musa ukuba neentloni – abantu bathanda ukuba ukulandelelwa!
Njani na umkhwetha zoqhagamshelwano?
Eyona ndlela eqhelekileyo ukuba uqhagamshelane nomntu lihambelana email, umyalezo wangoko nangoko, okanye 'uqhwanyazo'.
Ndincomela ugcina yothunyelo ekhawulezileyo izifungo ude uye le emails ezimbalwa kuba ukunika ixesha lokucinga ngento uza zokuthetha ufumane ukuva omnye umntu. Xa ufumana uqhelane namanye, ke ungaqala ukuyicima.
Ukuba akunayo ubulungu ihlawulwe, uya ekunokwenzeka kuqingqelwa ukuba usebenzisa 'ngoshiyi’ okanye 'ancume’ okanye into efana. Ezi imiyalezo enkonkxiweyo oya kuthi into efana “UNancy unomdla kuwe” okanye “Joe ngabomi kuwe”. Utyanda ngoshiyi, luvuyo ziyindlela ekhawulezayo ukuthi hello kodwa ebihamba umda ukukwazi kwakho pique umdla othile. Oku kakhulu kuxinzelelo ukuba iprofayili mabi kuba kuya kufuneka benze konke ukuthetha kwakho kuwe.
Email kuhle ekuqalekeni.
Imeyile umhla enokwenzeka kufana nje ukudlala. Injongo ye-email lokuqala kukufumana ukuba aphendule, ukuvula incoko. Ufuna ukufumana inzala yabo kodwa uliyeke ukuvula ended ukuze baya kusabela kubuyela kuwe. Gcina imeyile zakho zimfutshane kwaye unomtsalane. enye incam: musa ukuthumela uthotho emails kumntu omnye, ukulandela isantya kwaye zama ukuyigcina kunyuka. (Ukuba bathe bathumela 4 Iveki, Unokuyithuma 4 okanye ngeveki.)
Ngoko njani Ngaba Bhala Loo Email First?
Xa uphendula iintengiso zobuqu, uzame ukuba, kakuhle, personable. Bhala ubuncinane umhlathi okanye emibini malunga nawe kunye nento oyithandayo kubo okanye intengiso zabo zobuqu. Uninzi imigaqo yokubhala iprofayile isicelo email, ezifana ukuhlala ezintle, ukunyaniseka, yaye sinikela ingqalelo kufutshane upelo negrama.
Intlanganiso umntu ngekhompyutha imincili kakhulu kwaye kunokukwenza uzive ngathi uthando wambetha elivisayo, kodwa konke okusemandleni akho ukuba ngathi mnye. Inkoliso yethu ufuna umntu ukuba uqolile kancinane, umntu ukuba liqaqambile ngenxa yokuba neqabane ebomini. Xa uqala kuqala incokola umntu, akukho nto iphosakeleyo ngudlalani, bonwabe, kwaye behleka, kodwa qinisekisa ukuba akukho phezu phezulu. ngokunjalo, musani ukuqalisa asintumeke umphefumlo wakho, uyixelela konke malunga yakho ex-iqabane okanye ex-ezibalulekileyo kwezinye. Kuphephe ukuthetha ngezinto zobuqu ezifana iingxaki zemali, nemiba yempilo, okanye amabali osapho lwakho kakuhle. Le jiko enkulu, kwaye indlela ebalaseleyo ukoyikisa umntu kude. Gcina ukuba uhlobo intetho ngoLwesine umdlalo yakho hayibo ubusuku nemini kwi-iinwele. Ukuba ungumzali ongatshatanga, kancinci incoko malunga abantwana benu kuhle ukwaphula kulengqele ukufumana esivumelana, kodwa khumbula ukuba uzama ukwakha uqhagamshelo ngokuthandana, ngoko ke oko kakhulu ubuncinane.
Ukuba ubudlelwane enambuzelayo phambili, inyaniso iya kuphuma ekugqibeleni. Eyona nto ibhetele ukuba wena phambi kunokuba ukuthetha ubuxoki abafazazana ekuqalekeni, ukuba nakufunyanwa kuphela kwaye babe nolwalamano amandla kuwa ngaphandle.
Into yokugqibela nabani na ufuna ukuthumela umyalezo kumntu kunye nempendulo, kukuva konke malunga elidlulileyo Baphela ubudlelwane, neengxaki zempilo, okanye iingxaki zemali. Unakho ukwabelana yâbo sisithokothoko emva kokuba ukwazi omnye kancinane. Okanye ngcono noko, Ndibeke zonke iimpahla emva kwakho kwaye nobomi. Akukho xesha nje nge langoku ukwenza uqalo olutsha!
into Compliment wena umdla kwiprofayili yabo.
Oku kulapho kubalulekile ukufunda inkangeleko yomntu. Inika izinto ukuthetha ngawe. Umzekelo, ukuba ungumfazi kwaye ufumane umntu umdla uye izinja Labrador kanye kuwe, unokuthi into efana, “Mholo. Igama lam uMariya ndaqaphela kwiprofayile yakho ukuba Labs. Ndiyenza nam!” ukusuka apho, ukunika inkcazo emfutshane inja yakho, endingatshoyo kuwe ungathanda ukuva emva, kwaye zisayinele.
Kuphephe izimvo azenzi ngokwesondo.
Musa ayazibika kakhulu ekuqaleni kunye nesini uze uzame ukuba bagqabaze ifoto yomntu. Fumana into encinane kakhulu 'olunzulu’ ukuba izimvo, mhlawumbi kukho into bathi kwinkcazo wabo.
Fumana indlela ukuqhubeka unxibelelwano.
Ingongoma ephambili email lokuqala kukufumana ukuba qaphela wena ukusabela kuwe. Musa ukunikezela inkcazelo eninzi, kodwa ba xelele ngokwaneleyo ukuze babe nomdla. Uzama ukufumana incoko, ngoko ngokubuza imibuzo Yingcamango elungileyo, nje yokuba ningaceli ezininzi kakhulu.
Xela izinto onazo ngendlela efanayo, kwaye ubuze umbuzo okanye ezimbini ngazo.
Umzekelo, xa uqala kuqala bemiyalezo nomntu, unokubuza, “Ngaba ukwenza into fun kule veki?” “Ingaba unazo naziphi na izicwangciso olukhulu veki?” Oku kuya kukunceda ufunde ngakumbi mntu ngaphandle zibonakala Nosy. Emva kokuba sele ukunxibelelana kunye nomntu ixeshana, unako ukusebenzisa imibuzo abamsulwa ukubona ukuba ningawufumana baqhaqhe ixesha xa ababini kuni usenokudibana.
Zama ukuphepha iileta elide kunye neenkcukacha ezincinane ukuze kuqwalaselwa yindinisa.
Gcina kwi ngongoma, kodwa zama ukubavumela ubuntu bakho ikhanyise. ngelo xesha, umgaqo osengqiqweni “uncome kwaye nemibuzo.” An ezincedisana wokunyaniseka azenzileyo loo mntu, isimbo sokubhala, okanye injongo zobomi kuthi kakhulu.
Nazi isibini okulungileyo, izihloko yokuqalisa ice-ligqobha:
Ukuba uhlala kwindawo enye, izimvo kwindawo, okanye into enxulumene nayo. Ukuba awunalo uhlala kwindawo enye, ungabuza imibuzo malunga apho.
Umculo kunye eshukumayo nazo elungileyo incoko-usenokuqalisa; eyona wonke uthanda ezinye iintlobo zezixhobo zomculo, okanye bhanya.
Mhlawumbi baya kwiikholeji ifane okanye ibe ngcono noko, kwisikolo ungamzekeli. Wayesenza ehlekisa kwizikolo usoloko yindlela eyolisayo ukuze akhululeke.
Asayine igama yakho yokwenyani kuqala…
Ukuba usebenza eli lungelo, umntu uya kuqhagamshelana nawe emva. khumbula, nokuba ufumana impendulo, kuza kufuneka ukuba agcine umdla wabo. Kwi emails ezilandelayo, sihlale sizibuza imibuzo kwaye ugcine nokumncoma (ngoxa ukunyaniseka ezintle). Xa uziva ukhululekile, ungahambisa kwi iintlobo senithandana njengonxibelelwano imiyalezo, ngomnxeba, yaye ekugqibeleni, ntlanganiso umntu.
Ukuba imini uya kuze akuvanga kubo, kunokuba inundate yeposi yomntu kunye nemiyalezo, zingashiyi mfutshane, umyalezo elithozamisayo nelinika uthsuphe encinane ncedo kuye okanye ukuphendula.
Musa ukunika igama lakho elipheleleyo, Idilesi ye email lobuqu, okanye inombolo yefowuni kule email lokuqala; ulinde de bobabini abanomdla nto kwacaca ukuba izakuba kwindawo ethile.